'Ekeeraan' 41,000 mindaan kanfalamaafii ture galmeerraa haqaman - BBC News Afaan Oromoo
'Ekeeraan' 41,000 mindaan kanfalamaafii ture galmeerraa haqaman
Moozaambik namoota erga du'anii akka lubbuun jiraniitti miindaan kaffalamuuf 41,000 galmee irraa haqxe
Biyyoota tokko tokko keessatti hojjettota mootummaa lubbuun hin jirreef miindaan kaffalama.
Kunis akkuma yeroo isaan lubbuun jiraniifi hojii irra jiraniitti ilaalameeti.
Haa tahu malee odeffannoowwan garaagaraa biyyota tokko tokko irraa dhagahamaa turan miindaan kaffalamu maatii nama du'eef osoo hin taane hojii irra jiru jedhanii maqaa nama sanaan namoota miindaa sana fudhataniifi.
Kun Moozaambik keessatti tibbana bira gahameera. Bara 2015 hanga 2019tti qorannoo taasifameen hojjettotni 41,000 tahan miindaan kaffalamaafii ture eessa jiru yommuu jedhamu namni qaamaan dhiyaatu dhibe.
Jarri du'aniiru. Waggota afur gidduuttis miindaan Doolara miliyoona 50 kaffalameeraaf.
'Bubbeen rooba makate lubbuu namoota 1000 galaafate'
Egaa kanatu ekeraaf miindaa kaffalaa turre jedhan. Kanaafuu ammaan qabee dhaabbachuu qaba jedhamuun hojjettota ekeraa 41,000 deebisnee galmee kaffaltii miindaa irraa haqneerra jechuun ibsite, ministirri ministirri Siivil Sarvisii biyyichaa Karmeeliitaa Namashuulaa kan ibsite.
Image copyright Veronique DURRUTY
Goodayyaa suuraa Maputo Moozaambik
Egaa kanaafidha hojjettota ekereraa jechuun kan waaman kannen deebisnee ajjeesneerra kan jedhaniif.
Sakatta'insa hojjetoota mootummaa lubbuun jira adda baasuuf gaggeeffameen hojjettota mootummaa hojii irra jiran 336,000 fi kannen lubbuun hin jirre 41,000 adda baasuun danda'ameera.
Miindaan hojjettota lubbuun jirreef kaffalamaa ture kana booda tajaajila hawwaasaaf, manneetii barnootaa fi hospitaalota deeggaruuf akka oolus Karmeeliitaa Namashuulaa himteetti.
Hobomboleettii Indiyaa: Moozambikiifi Zimbaabuween bubbee hamaan rukutaman
Cyclone Kenneth: Roobni hamaan bubbeen makate ammas Moozaambik haleele
26 Elba 2019
Oromiyaa: Hojjettoonni mootummaa 6,700 ragaa sobaan qaxaraman of saaxilan
21 Fuulbana 2017
Eertiraan hidhamtoota siyaasaa 28 akka gadhiiftuu Amnastiin gaafate
Kuusaa boba'aa guddicha Ameerikaan lafa jala dhoksite
Haleellaan Sa'uudiin booda 'daran yaadda'e' jedhe 'Nato'n
'Baqattoonni Siiriyaa miiliyoona 3 ta'an biyyatti deebi'uu danda'u'
'Naannoo ta'uun furtuu waan hundaa ta'uu hin danda'u'
Marii hidha haaromsaa 'waliigaltee malee waggoota afur'
'Rasaasa lamaan du'aa jirra, tokko halkan tokko guyyaa'
Bara Afaan Oromoo qormaata biyyoolessaa irratti kennamuu eegale
Namtichi daa'ima ganna torbaa gudeeduun himatame